Wararkii Ugu danbeeyay ee Degmada Buulo Burde iyo hawlgalki ay gelinkii dambe ee maanta kula wareegayn Ciidamada Dowladda « AYAAMO TV
Wararkii Ugu danbeeyay ee Degmada Buulo Burde iyo hawlgalki ay gelinkii dambe ee maanta kula wareegayn Ciidamada Dowladda
1647 Views Date March 13th, 2014 time 6:10 pm
Ciidanka AMISOM ee Ethiopia iyo kuwa Dowlada Soomaaliya ee Gobolka Hiiraan ee oo kaabaya , ayaa Maanta Gelinkii Danbe waxay la wareegeen degmada Buula-Burte ee gobolka Hiiraan.
Kadib Lawareega ay la Waregayn Ciidanka AMISOM ee Ethiopia iyo kuwa Dowlada Soomaaliya ee Gobolka Hiiraan ee oo kaabaya ayaa waxaa Ka hadlay Gudoomiyaha Maamulka Gobolka Hiiraan ee Dowladd wuxuuna sheegay in ay Si Nabad ah Ku Galayn Magalada .
Cabdi Faarax Laqanyo, ayaa ku waramaaya in uu isagu hogaaminaayay hawlgalka lagu qabtay Degmada Buulo Burde, isla-markaana uu hawlgalku ahaa mid guuleystay Ayaa Yiri :
“Anigaa hogaaminaayay hawlgalka lagu qabtay Buulo Burde, hawlgalka lagu qabtay Degmada Buulo Burde waa mid guuleystay.,24 saac Shabaab waa soo gaba gabeen doonaa meelaha, ay kaga harsan yihiin Gobolka Hiiraan.”
Dhanka kale Gudoomiyaha Maamulka Gobolka Hiiraan waxa uu sheegay in Ciidamada Dowladda iyo Amisom, ay saacad kasta ku dhaqaaqi karaan Degmooyinka Jalalaqsi iyo Maxaas, si gacanta Dowladda loo soo geliyo Degmooyinka, ay Shabaabku ka jooggaan Gobolka Hiiraan.
Gudoomiyaha Maamulka Gobolka Hiiraan Cabdi Faarax oo caawa la hadlay Idaacada Goobjoog ee Magaalada Muqdisho, ayaa wax laga weydiiyay xaalada Degmada Buulo Burde, wuxuuna sheegay in ay tahay mid deggan ayna Gacanta ku Hayaan Magalada Si Buuxda.
Sidoo kale Cabdi Faarax Laqanyo ayaa hoosta ka xariiqay in ay si diiran u soo dhaweeyeen dadka reer Buulo Burde, waxayna noo sheegeen buu yiri in ay farxadeen Degmada Buulo Burde Wuuxuna sheegay in Ciiidanka Xoogga Dalka ee Gobolka Hiiraan ay fariisimo waaweyn ka sameystayn Garoonka diyaaradaha ee Degmada Buulo Burde, iyadoo Ciidanka Jabuuti ay ku sugan yihiin Bartamaha Degmada.
Ugu Danbayntii Col. Cusmaan Dubbad oo ka mid ah Saraakiisha sar sare ee Ciidanka Jabuuti ee Gobolka Hiiraan ayaa ahaa Sargaalkii hogaaminaayay Ciidanka Amisom, ee dhinaca Galbeedka ka soo galay Buulo Burde.